Tag Archive for "अमेरीकी डलर" - आज घट्यो डलरको मूल्य, कुन देशको विनिमयदर कति ?
आज घट्यो डलरको मूल्य, कुन देशको विनिमयदर कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले 'बैशाख २०' लागि एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य ११० रुपैयाँ ६८ पैसा तोकेको छ । यसैगरी बिक्री मूल्य १११ रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ । एक युरोको खरिददर १२४ रुपैयाँ ०५ पैसा छ भने बिक्रिदर १२४ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १४४ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रिदर १४५ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । यसैगरी जापानीज १० यनको खरिददर '९ रुपैयाँ ९३ पैसा छ भने बिक्रिदर ' ... थप पढ्नुहोस्
मंगलबारको विदेशी मुद्राको विनिमयदर ‘हेर्नुस’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारको 'पुस ३' लागि एक अमेरीकी डलरको खरिद मूल्य ११४ रुपैयाँ १८ पैसा तोकेको छ । यसैगरी बिक्रि मूल्य भने ११४ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ । एक युरोको खरिददर १२९ रुपैयाँ ४८ पैसा छ भने बिक्रिदर १३० रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ । यसैगरी एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १४४ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रिदर १४४ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ । यसैगरी जापानीज १० यनको खरिददर १० रुपैया... थप पढ्नुहोस्